Lozam-pifamoivoizana an-dalambe Ankizy 10 isan’andro no mahita faisana eto Madagasikara
Potika sy dibo-drano ny lalan’Iarivo Mampahory vahoaka ny fifamoivoizana
Potika ny lalana, ary dibo-drano izay aleha eto Antananarivo, indrindra fa amin’ny faritra iva amin’izao fotoam-pahavaratra izao.
Kaominina Antananarivo Renivohitra Hampiharina ny lalàn’ny fifamoivoizana
Tsy maintsy hampiharina amin’izay ny lalàn’ny fifamoivoizana sy ny fiantsonana eto Antananarivo Renivohitra.
Anosizato, Fasan’ny karana Amin’ny 5 ora hariva dia efa raikitra ny sinto-mahery
Amin’ny 5 ora hariva dia efa miasa ireo mpanao sinto-mahery sy mpangarom-paosy etsy Anosizato sy Fasan’ny karana isan’andro, raha araka ny fanazavan-dRandrianarijaona Liva, sefom-pokontany etsy Anosizato Atsinanana I.
Mbola ambony dia ambony ny tahan’ireo olona lasibatry ny lozam-pifamoivoizana eto amintsika.
Ankizy miisa 10 isan’andro no lasibatr’izany eny am-pandehanana hamonjy sekoly eto Madagasikara raha mitotaly 1,3 tapitrisa isan-taona kosa ireo mamoy ny ainy maneran-tany. Ireo tanora 15 ka hatramin’ny 29 taona no tena maro an’isa mamoy ny ainy. 20 ka hatramin’ny 30 tapitrisa kosa ireo mitondra takaitra tsy fidiny sy miaina anaty horohoro lava. Nivoitra ireo omaly nandritra ny tatitr’i Biova Agbodou, tale jeneralin’ny orinasa Total Madagascar izay hiara-kiasa akaiky amin’ny fikambanana ABCD sy ny OMS sy ny minisiteran’ny fanabeazam-pirenena amin’ny fanatanterahana ilay tetikasa fiarovana ny aina eny am-pandehanana. Ankizy miisa 12.500 mpianatra amina sekoly ambaratonga voalohany miankina sy tsy miankina amin’ny fanjakana miisa 30 any amin’iny lalam-pirenena faharoa iny no hiantefan’izany. Tanjona ny hanofanana ireo ankizy mpianatra ireo ireo fihetsika tokony hatao rehefa hiampita arabe, izay arahina fizarana fitaovana toy ny boky…Tsiahivina moa fa efa tamin’ny taona 2014 no nanatanterahana ity tetikasa ity teto amintsika ireo mpiara-miombon’antoka ireto ka ankizy mpianatra manodidina ny 35.000 isa no efa nahazo tombontsoa amin’izany.